WhatsApp dia nohavaozina amin'ny iOS mamela an'i Siri hamaky hafatra | Vaovao momba ny gadget
WhatsApp dia nohavaozina amin'ny iOS mamela an'i Siri hamaky hafatra
Ny mpampiasa IOS dia tsara vintana raha toa ka mampiasa Siri sy ny fampiharana fandefasan-kafatra quintessential, WhatsApp. Ity indray mitoraka ity dia tonga amin'ny kinova 2.17.20 izay efa misy ho an'ny fisintomana mandritra ny ora vitsivitsy ary mamela ny mpanampy iOS hamaky ireo hafatra farany voaray raha tadiavin'ny mpampiasa ary raha mbola ao amin'ny iOS kinova 10.3 na avo kokoa ianao. Mazava ho azy, ho fanampin'ity zava-baovao ity izay malaza indrindra amin'ity kinova vaovao ity, ny fanavaozana dia manampy fanatsarana hafa izay tavela any aoriana.
Ireo fanatsarana hafa dia miompana indrindra fanatsarana ny maso ao amin'ny kiheba antso sy ny efijery fampahalalana an'ireo vondrona sy mpifandray, ankoatry ny famelana ny mpampiasa safidio eo amin'ny efijery "My Status" ny safidy handefasana, hamafana na hisafidy sangan'asa maro miaraka. Ary farany ao amin'ny naoty fanavaozana dia azonao atao ny mamaky fa nanampy ny dikanteny persiana izy ireo.
Raha ny marina, ny zava-baovao aterak'ity fanavaozana ity, araka ny nampitandremanay tany am-piandohana, ny fahafahan'ny mpampiasa mangataka amin'ny mpanampy hamaky ireo hafatra voaray. Amin'izao fotoana izao, ireo fiasa vaovao ireo dia nampiana ireo izay efa namela ny fandefasana hafatra niaraka tamin'ny mpanampy Apple nandritra ny fotoana fohy noho ny famoahana ny API mpanampy. Toa mazava ny tolona mba ho fampiharana fandefasan-kafatra tsara indrindra ary maro ireo mpampiasa izay na dia eo aza ny safidy hafa tsy misy te-hiala amin'ny WhatsApp, zavatra iray etsy ankilany ary androany tsy dia hitantsika loatra izany hatrizay ny fampiharana dia mahazo fanavaozana tsy tapaka, miaraka amin'ny fanatsarana mahaliana matetika, zavatra izay tsy nitranga tao anatin'ny fotoana fohy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Software » WhatsApp dia nohavaozina amin'ny iOS mamela an'i Siri hamaky hafatra
Amazon dia mampihena ny vidin'ny Kindle Paperwhite sy Voyage hankalazana ny Andron'ny boky
Fetsy 7 hanararaotana ireo kaody miafina miafina sy menus